ဘန်းကျော်ကြားဖြတ်သတင်း — MYSTERY ZILLION
ဒီနေ့ ဘန်းကျော်ကနေ ဖိုရမ်တော်တော်များများနဲ့ ဆိုက်တော်တော်များများကို ဝင်လို့မရဘူးလို့ ကြားပါတယ်။ ဂျီမေးတော့ရသေးတယ်။ ဒီအမ်ဇက်ကို ကျော်ခွဝင်တာတောင်မရဘူးတဲ့။ နောက်ပိုင်းကိုယ့်လူ တွေကျော်ခွ လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် အသစ်တွေ ရရင် အချင်းချင်းပဲ လက်သိပ်ထိုးပေးကြပါ။ အားလုံးသတိ။
ဒါကြောင့် မော်မော်တွေ၊ မာမာတွေ၊ မင်မင်တွေ ပျောက်နေတာကိုး။
မြန်မာဆိုက်ဘာဆိုရင် Admin email တောင်အဟက်ခံလိုက်ရပြီထင်တယ် ။ ဘန်းကျော်ပြင်ပကတောင် ဖွင့်မရတော့ပါ။ ကျနော့ဆီကို spam mail တွေပို့နေတယ်ထင်တယ်။ ကြောက်လို့ email တောင်မဖွင့်ရဲဘူး။ ဒါကြောင့် MZ မှာ members တွေနည်းနေပါတယ်လို့။
Cracker Individually လား ... Gov ကလုပ်နေတာလား ???
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... မကောင်းတာကတော့ မကောင်းတာပါပဲ ... :106:
ပြောမနေပါနဲ့ တော့ဗျာ ဒေါသတွေ Heat တက်ပြီး ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် ပြန်သင်ဂြိုလ်လို့ ရတယ်။ :14::14::14:
အင်း...ဟုတ်ကဲ့... ၀င်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူး...ခင်ဗျ... ဆိုက်တက်လာတာကိုက...အရမ်းကို လေးနေတာ... အဲဒီတော့.. Browser က ... ကြာလာရင် ... Network Time Out လုပ်လိုက်တာပေါ့ ဗျာ... အဲဒီတော့ကာ.. ၀င်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ...ကျွန်တော်ကတော့...ဗျာ... မိရိုးဖလာ... U လေးနဲ့ဘဲ အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ် ...:D ... အမြဲတမ်းတော့... Sucessfully တော့ဘယ်ရမလဲပေါ့ဗျာ ... Fail ဖြစ်သွားရင်လည်း ... နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ် ... မရရင်နောက်တစ်ခေါက်...နောက်တစ်ခေါက် ပေါ့ဗျာ... ((ဒီမှာတေ့ာတွေ့မိတယ်..ဘယ်သူပြောတာလဲမသိဘူး) ......လဲကျရင်ပြန်ထပေါ့ဗျာ...) .. တစ်ခြားဆိုဒ်တွေလည်း ... တော်တော်လေးပါတယ် ... ပြောပြန်ရင်လည်း...အောင်မင်းလွန်ရာကျ မယ်ပေါ့...ဗျာ ...နောက်ဆုံးတော့..ဘယ်သူမပြုမိမိမှု...ပေါ့...ဗျာ..ကိုယ်ဘဲဒီဟာကြီးမှ...မသုံးရရင်... သေတော့မလိုကို...ဖြစ်နေတာလေ...:D
ကျနော် ကြားရသလောက်တော့ အဓိက အချက်နှစ်ချက်ကြောင့် ဒီလို ကော်နက်ရှင်တွေ လေးနေပြီး၊ ပြုတ်ပြုတ်ကျတာဗျ။
၁။ ရှိတဲ့ ISP ဝန်ဆောင်မှူ ၂ခုလုံးက Customers တွေများလာပေမယ့် Bandwidth တွေထပ်တိုးမဝယ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ မျှသုံးနေရတယ်။
၂။ ISP တွေမှာ Site Filters တွေခံထားတယ်။ Loading လုပ်ရင်ကြာအောင်ပေါ့။
ဘန်းကျော်ပြင်ပ မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အိမ်ကလဲ mz ကိုဝင်လို့ရတယ် ရုံးမှာလဲရတယ်
ဘုရင်မကြီး ဒဘယ်လယူရေ ကျွန်တော်လဲဘန်းကျော်ကပါပဲ။ ဒီတိုင်းလုံးဝဝင်လို့မရဘူးဗျ။ အခုတောင် ပညာစုံအကုန်သုံးပြီဝင်လာရတယ် :d:d:d
တော်သေးတာပေါ့ Freegate တစ်ခေါက်တက်လာလို့ အမ်ဇက်ကို အတင်းဇွတ်ဝင်လာတာနို့မို့ရင်တော့လား ဘာမှမသိဖြစ်လိုက်ရမှာ
ညလေးကလည်း သူက ဘန်းကျော်ပြင်ပကလူပါဆို.....
ဟုတ်ပါ့ ကိုရဲမာန်ရေ ကျွန်တော်လဲမျက်လုံးမကောင်းတော့ဘူး ဟီးဟီး :d ( ဘာမှမဟုတ်ကိုယ့်အမှားကို ကာကွယ်တာ )
ကျော်မယ်၊ ခွမယ် Open VPN တဲ့
အရင် Download လုပ်လိုက်ပါဦး။
အတားအဆီးတွေ ကျော်ဖြတ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလ် အတော်များများရှိပါတယ်။ Alwaysvpn ကတော့ windows,mac,linux စတဲ့ ပလက်ဖေါင်း အားလုံးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ XP အတွက်ပဲတင်ထားပါတယ်။ Beta version မှာတောင် အတော်လေး အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ VPN( virtual private network ) တည်ဆောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆာဗာပေါ ်ကနေ ဖြတ်သန်းစေပါတယ်။ သုံးထားတာက Opendns server ပါ။
Alwaysvpn သုံးရင် U.S only တွေဖြစ်တဲ့ ABC,Pandora,Veoh,Hulu,CWTV စတဲ့ အင်တာနက် တီဗီ တွေ ကြည့်နိုင်တဲ့ US ip ကို ရရှိသွားပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင် သိပ်ကျဆင်းရင် ပြုတ်ထွက် သွားတတ်ပေမယ့် auto reconnect လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီလင့်မှာ Alwaysvpn ရယူနိုင်ပါတယ်။ Torrent download လုပ်နိုင်အောင် Openvpn ရယူပြီး ဖြစ်နေရင် install လုပ်ရာမှာ openvpn ကိုဖြုတ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံက Openvpn GUI ကိုဖွင့်ပြီး system tray icon မှာ ညာကလစ်နဲ့ alwaysvpn-tcp-compatible ကို connect ရွေးပေးထားရုံပါ။ ချိတ်ဆက်သွားရင် အိုင်ကွန်ဟာ အစိမ်းရောင် ဖြစ်သွားပါမယ်။ Alwaysvpn-udp-faster က error correction လုပ်ပေးပါတယ်။ Proxy address နဲ့သုံးနေလည်း browser မှာ ဖြည့်ပေးဖို့ မလိုဘဲ blank ထားပြီး သုံးရပါတယ်။ အညှီအဟောက် site တွေကို ဒီနည်းနဲ့ ကျော်ရင်တော့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး Opendns က တားပါ လိမ့်မယ်။
Thank you Ko noor,
Now I get new item to ban.:D
ဟား ဟား ဟား ပိတ်ချင်သလိုပိတ်ဗျား ကိုအိုင်းစတိုင်း နောက်တစ်ခုဆက်ထွက်လာပါဦးမယ် ဗျ
ကို Istein က ban ဖို့ဆိုတော့ Bagan ဒါမှမဟုတ် MPT မှာအလုပ်လုပ်နေတာလား
အထင်တော့မလွှဲလိုက်ပါနဲ့ စာလွှာများ မရောက်လာခဲ့ရင်။ အမိမြေကို ပြန်ချင်ပါသတဲ့နော်။ ကိုယ်တို့စစ်သားဘဝဟာ......................:)
Mz မှ မန်ဘာအချင်းချင်း လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြောပေးကြပါ။
mz ကို ကျော်ခွပီးမှလာလို့ရကြောင်း။
ဘန်းချင်သလောက် ဘန်းပါစေ....ဒို့ကတော့ Open VPN ပဲသုံးတယ်။
(ဟီး...ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ တစ်နေ့လုံး Open VPN က မတက်ဘူးဗျ ဟီး...ဟီး)
သူကလည်း Connection စကားအရမ်းပြောတာပဲ။ ကွိကွ...ကွိကွနဲ့။ မကောင်းဘူး ....အီး။
ဒါနဲ့ မြန်မာကလင်းနစ်ဆရာတွေတည်ထာင်တယ်လို့ပြောတဲ့ www.myantel.co.cc နဲ့ MZ ကို လာရတာ။ စမ်းသုံးကြည့်နေတုံး၊ ကဲ....ကိုကြီးအိုင်းစတိုင်းရေ....တင်စရာရှိလဲမြန်မြန် တင်တော့လေဗျာ.။
(အင်း ထီများပေါက်လို့ကတော့လေ ကွန်နက်ရှင်လိုင်းတွေများများ ၀ယ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကို နက်ဆိုင်တွေစီပြီး ဖွင့်ပြစ်လိုက်အုံးမှာ....)
တော်တော်ဆိုးနေပြီ နဲ့တူတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။ wifi လုပ်မပေးရင် နေပါစေ။ ဒီဟာလေးကိုပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်။ (:((:((
ကြိုက်၏။ ကောင်း၏။ ဂွတ်၏။ စံနစ်ကျ၏။ open vpn ကို သုံးကြည့်ကြပါ။ သို့သော် အနည်းငယ်နှေး၏။ ကိစ္စမရှိ။ ဒီလောက်နှေးတာများတော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးသည်။
ကျနော် MZ မှာ ဝင်မရေးဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာပါပြီ။ အဲ့ဒီ connection ကြောင့်ရော၊ စာမေးပွဲရှိတာကြောင့်ရော(ကျနော််လဲ ထွက်တော်မူနန်းကခွာဖို့ကြိုးစားနေလို့) ပေါ့။ တခါတခါတော့ ဝင်တော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Blue Sky ပြောတဲ့
wifi လုပ်မပေးရင် နေပါစေ။ ဒီဟာလေးကိုပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်။ (:((:((
ဆိုတဲ့ စကားလေးကြားတော့ ကျနော် ကြားဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို သွားသတိရပြီး စိတ်ထဲ တော်တော်လေး feel ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ သုံးရတာပဲတော်လှပြီ ဆိုတဲ့ ကျနော့ သူငယ်ချင်းဆိုင်မှာလာသုံးတဲ့ အဒေါ်ကြီးပြောသွားတာကိုပါ။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေအကုန် ထွက်တော်မူနန်းကခွာပြီး ဂီလာန သူအိုသူနာတွေ၊ ပညာမဲ့လူအန္ဒတွေနဲ့ အရင်းရှင်တွေပဲကျန်တော့မယ့် အနာဂတ်အတွက်.... နောက်ပြီး တကယ်လို့ ဒီလိုမျိုးသေးသေးလေးတွေကိုသာ ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ရွှေမှ ကမ္ဘာမှာ မျက်နှာငယ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဟိုး.... အနောက်ကို မျှော်ဖို့ဝေးစွ၊ အိမ်ရှေ့ခြေရင်းနားက ပွဲစား(တစ်ချိန်က ကျနော်တို့ကိုမော်ကြည့်ရတဲ့စင်ကာပူ)အိမ်ကတောင် မလေးစားချင်တော့ဘူး။ အမိမဲ့သားရေနဲငါးလို မျက်နှာငယ်တယ်ဗျာ။ အခုစင်ကာပူက သတင်းတွေ အားလုံးကြားမှာပေါ့...... :2: :2: :2:
MZ ကို ဒီက ၀င်တာများတယ်
ကိုဖီးနစ်ရေ၊ ဒါဆိုလဲ ကျနော်တို့တွေ ပညာနဲ့ သွားအလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပေါ့။ သာမန်လေဘာတွေပဲ များနေရင် လူမလေး၊ ခွေးမခန့် ဖြစ်နေကြမယ်။ အိန္ဒိယ သမ္မတဟောင်း အဗ္ဗဒူကာလမ် ကသူ့စာအုပ်မှာ ဘယ်လိုကြွေးကြော်ထားလဲဆိုတော့၊ နောက်ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ ဟာနည်းပညာရှင်တွေ ကမ္ဘာကို အဓိက Supply ပေးတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ရမယ်တဲ့။
ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေ သချင်္ာကိုတော်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ကျောင်းတွေမှာ သင်္ချာဘက် မှာမျက်နှာပန်း ပွင့်ကြပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျနော်မြင်သလောက်ပေါ့နော်။ သင်္ချာတော်မတော်တော့ မသိဘူး။ critical thinking ပိုင်း မှာတော့ ဘန်းကျော်သားအများစု ညံ့ကြပါတယ်။ တော်တဲ့လူနည်းစုကို မပြောဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ EQ ကြတော့ ဘန်းကျော်သားတွေ အရမ်းမြင့်ကြတယ်နော်။ သေမှာကြောက်လို့လားတော့ မသိဘူး။ အဝတ်အစား လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်မှ ယဉ်ကျေးတယ်ထင်တဲ့ ဘန်းကျော်သားတွေကတော့ တဗြုတ်ကြီးပဲဗျို့။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေလို့ကတော့ နောက်ဆို Internet ဆိုတာ ချိုလားဟင် စားလို့ကောင်းလားဟင် ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ကျနော် တခု အကြံပေးချင်တာက ကျော်တဲ့ခွတဲ့နည်းကို PM တွေနဲ့ပဲ ဝေကြပါလား။ မဟုတ်ရင် ကျားမွေးရင်း သမင်စားရင်း ဖြစ်နေအုံးမယ်။:D နောက်ပီး Internet ဆိုင်မှာ သုံးတဲ့သူတွေက သုံးပြီးရင် လက်စလက်နလေးတွေ ဖျောက်ခဲ့ကြပါလား။ ပြီးတော့ ဆိုင်ရှင်ကိုလဲ ခင်အောင်ပေါင်းထားပေါ့။ ဆိုင်ရှင်က ယောက်ကျားလေးဆို ရင် အရက်ပုလင်းတို့ ဆေးလိပ်ဘူးတို့ လက်ဆောင်ပေးပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း talking နဲ့လုံးပေါ့။ ဘန်းကျော်သားတွေ talking မှာတော့တော်ကြပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ တချို့ဆို တနေကုန် ထိုင် talk နေကြတာ။
(ဒီ post ကို spam လို့ ထင်ရင်တော့ ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒီစာတွေဖတ်ရလို့ Istein ကို မကျေနပ်တာရှိရင် ဘန်းကျော်သားပီပီ မမြုံထားကြပါနဲ့ PM ပို့၍ ဆဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ)
အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့စာရိုက်တာမှန်သမျှကို key logger သုံးပြီး ခိုးမှတ်နေတဲ့ mmcybernet ၀က်ဆိုဒ်ကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီ၀က်ဆိုဒ်ကို ကြီးကြပ်နေတဲ့ administrator တွေဟာ ဒီ၀က်ဆိုဒ်ထဲမှာ လာရောက်ပြီး register လုပ်ကာသုံးစွဲနေသူတွေရဲ့စာရေးသားမှုတွေ၊ သွားရောက်ကြည့်ရှူတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို keylogger သုံးပြီးမှတ်ထားတာကို စစ်ဆေးတွေ ့ရှိရလို့အဲ့ဒီ ၀က်ဆိုဒ်ကို ရပ်တန် ့အောင် လုပ်လိုက်ပြီး သတိပေးစာကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထား တွေ ့ရှိရပါတယ်။
နောက်နောင် ဒီလိုမျိုး အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့မှတ်တမ်းကို ခိုးကြည့်တာတွေလုပ်မယ်၊ ခိုးမှတ်ထားတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် အခုလိုမျိုး ဒဏ်ခတ်ခံရမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဆေးကြည့်ရှူပြီး ဒဏ်ခတ်ဆောင်ရွက်သူတွေကတော့ ကို်ယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းများကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သူများအဖွဲ ့လို့ခေါ်ဆိုလို ့ရတဲ့ “Privacy Lover Team” အမည်နဲ့မည်သူမည်၀ါတွေဆိုတာ မဖေါ်ပြထားတဲ့ အဖွဲ ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဆေးတွေ ့ရှိရတဲ့ mmcybernet ရဲ့Admin List ကို ၄င်းတို ့ရဲ့IP address လိပ်စာများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှူတဲ့အခါမှာ နေရာ (၃) ခု ပါ၀င်ပတ်သက်နေတာ တွေ ့ရှိရပါတယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ - 203.81.166.10 က ပုဂံနက် (Bagan Cybertech Teleport) ရန်ကုန်က ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ - 220.255.7.248 က စင်နက် (SingNet Pte Ltd) စင်ကာပူက ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယတစ်ခုကတော့ - 213.85.146.5 က အေဗွီကေ (AVK-Systems Ltd) မော်စကိုမြို ့၊ ရုရှနိုင်ငံက ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းတွေမှန်မမှန်အတည်ပြုပေးကြပါ။ ကျနော်နစ်နေမန်း ဘလော့မှာတွေ့တာပါ။ မှန်ရင်တော့ အဲဒါမကောင်းဘူးဗျာ။ ကျနော်လည်း အဲဒီမှာ မန်ဘာဝင်ထားတယ်ဗျ။ :14::14:
နာ့ဘော်ဘော်ကြီး အဲဒီသတင်းက လုပ်ကြံကြီးထင်တယ်နော် ။ ကျနော်က မြန်မာဆိုက်ဘာ ရဲ့ Admin ဆီကတောင် email ရတယ် ဒါပေမဲ့ remote logger တွေပါလာမှာဆိုးလို့ ဘာ links မှဖွင့်မကြည့်ရဲဘူး။ မြန်မာဆိုက်ဘာကို သက်သက်တိုက်တာလို့တော့ ကျနော်ထင်တာပဲ။ မဟုတ်ရင် အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်သူက ဒီလိုလုပ်ဖို့ အာဏာပေးထားလို့လဲ။ ပြီးပို့ထားတဲ့ email ကလဲ လူကြီးလူကောင်းမဆန်တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့။ hacking tech နဲ့ tools တွေကလဲ အသစ်တော်တော်လေးထွက်လာ။ ဘန်းကျော်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် မျိုးတွေနဲ့သွားတိုးတော့ အားလုံးတော့ ကိုယ်ကျိုးနဲကုန်တော့မှာပဲ။
ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျ။ သတိပေးစာရေးထာတာ၊ တစ်ကယ့် အဖွဲအစည်းပုံစံနဲ့ မတူဘူး။ အာဝါဒီးတစ်ကောင်၊ အင်္ဂလိပ်စာ တစ်ကြောင်းတောင်ဖြောင့်အောင်မရေးတတ်တဲ့ ကောင်ရေးထားတာ။
If you try to harm your members or anybody again, We will you again stupid admin
ဘာလဲ We will you again ဆိုတာ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချ ရအောင် ကျနော်တော့ ဘယ်သွားသွား hide my ass (free web proxy)
ကတစ်ဆင့်သွားတော့တယ်။ သူက ကောင်းတယ်ဗျ။ graphic ကော flash တွေကိုရော loading လုပ်ပေးတယ်။ မိုက်တယ်။
အဲဒီစကားပြန်ဆိုဒ်ဟာ တော်တော်ကောင်း ဉာဏ်ရှိသလိုသာ သုံးကြပေတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲ။
in these days, the connection is reli reli messive
Access Denied ဖြစ်သွားပီ ... :2:
ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိရအောင်ပါပဲဗျာ ... :2:
လူ့ဘ၀ တိုတိုလေးမှာ ... ... ...
MZ က သူငယ်ချင်းတွေရေ ... friend တို့လဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သူများတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်မိကြစေနဲ့နော် ....
နောင်ဘ၀ ကျမှ ခံရမယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေကိုတောင် တခါတလေမုန်းမိသလိုပဲ။
မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေ ခံစားရမဲ့အကျိုးရလဒ်ကို ဒီဘ၀မှာပဲ မိန်မိန်ရှက်ရှက်ကို ထိုင်ပြီးကြည့်နေချင်တယ်ဗျာ ..... :2:
" Harvest as u plant "
mm_legend က ဆိုမာလီက သုံးတော့ရမှာပေါ့။ ကို Alexander ကဘန်းကျော်က သုံးတော့ဘယ်ရပါ့မလဲ။:D
ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ် library မှာသုံးနေတာ အေးဆေးပဲ
အရင်က ကျောင်းက connection ကစုတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်သွားသွားသုံးနေတာ
ခုနောက်ပိုင်း connection တော်တော်မိုက်တယ်။
သူတို့ အစိုးရဌာနတွေမို့လို့ မလုပ်ကြတာလားမသိဘူး
နင်ကလဲ အရိပ်အကဲ သုံးပါးနားမလည်ဘူး။ ကောင်းရင် မြုံနေ၊ ထုတ်မပြောရဘူး။ သူများမိုးခါးရေသောက် ရင် နင်တို့ပါ သောက်ရမယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်မှာနော်။
:)MPT india ADSL လိုင်းကတော့အေးဆေးပဲဗျို့:P
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တောင် ဒီ forum မှာ၀င်ပြီးတော့ မေးဖူးသေးတယ်။ ကျွန်တော့် website ကြည့်မရလို့လေ။ အဲ့တုန်းကတော့ MZ က အေးဆေးပဲသုံးလို့၊ ၀င်လို့ရတယ်။ အခုလည်းကျရော ကျွန်တော့် website က အဆင်ပြေပြီးတော့ MZ က ၀င်လို့မရတော့ပြန်ဘူး။
ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ မသိပါဘူးဗျာ။ ဒါလေးနဲ့ လုပ်စားပါတယ်ဆိုမှ ဒါလေးကမကောင်းတော့ :2:
မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပြောလိုက်အုံးမယ် သူတောင်းစားခွက်ပျောက်သလိုပဲဗျို့။ :P :P :P
အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်က web developer တွေ ထိုင်နေရတော့မယ်ထင်တယ်။ internet မှ မကောင်းတာကိုး။ လစာတွေ အလကားရတော့မယ် ။
မှန်လိုက်တာဗျာ မြန်မာပြည်မှာ Web Developer လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျား